किन खाने खरबुजाको बिज ? यस्ता छन् महत्वपूर्ण फाइदाहरु ! – MediaNP
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०१२:०९0
गर्मी मौसममा पाइने खरबुजालाई अंधिकाश मानिसहरुले निकै मनपराएर सेवन गर्ने गर्दछन् । यो एक पानीले भरिएको स्वादिष्ट फल हो । यसमा करिब ९२ प्रतिशत भन्दा पनि बढि पानीको मात्रा पाइने गर्दा यसको सेवनले पानीको प्यास सजिलै मेटिनेछ । शीतलता प्रदान गर्ने शक्ति भएको कारण यो सबैको रोजाइको फल बनेको छ । खरबुजाको सेवन त सबैले गर्दछन् तर यसको बिजको भने सेवन गर्ने चलन छैन् । खरबुजाको साथमा यसको बिजमा पनि पोषक तत्व, आइरन, पोटासियम, मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रेशन, प्रोटीन फाइबर लगायतका अन्य तत्व पाइने कारण बीजको सेवन पनि मानव स्वास्थ्यको लागी फाइदाजनक छ । लागौं खरबुजाको बिज सेवन गर्नुको फाइदा तर्फः
१. पाचनतन्त्र बलियो बनाउन ।दैनिक रुपमा एक गिलास खरबुजाको बिजको चिया पकाएर सेवन गर्नाले स्वस्थ रहन सकिनेछ । खरबुजामा अधिक मात्रामा डाइट्री फाइबर पाइन्छ । जसको कारण पाचनतन्त्रलाई बलियो भई पाचनसम्बन्धी समस्या पनि समधान हुन्छ, कब्जियत भएकाको लागी यो निकै लाभदायक औषधी हो ।
२. जन्डिसबाट बच्न ।यदि कसैलाई जन्डिस भएको छ भने यसको बीजलाई सेवन गर्न दिएमा समस्या बढ्दैन् । खरबुजाको बिजलाई पचाएर वा चियाको रुपमा पकाएर सेवन गर्न सकिनेछ । यसबाहेक विभिन्न संक्रमण हुनबाट पनि बचाउने कारण राम्ररी चपाएर पनि सेवन गर्न सकिनेछ ।
३. त्वचालाई स्वस्थ बनाई तनाव कम गर्ने । खरबुजाको बिजमा भरपुर मात्रामा एन्टीअक्सिडेन्ट पाइने कारणले त्वचाको लागी यो निकै फाइदाजनक छ । खरबुजालाई मात्र नखाई यसको बिजलाई पनि राम्ररी चपाएर सेवन गर्नाले नसामा कुनै प्रकारको समस्या हुदैन् । तनाव हुनेले पनि दैनिक थोरै यसको बिज सेवन गरेमा तनाव कम हुनेछ । त्यस्तै नियमित रुपमा तरबुजा पाइने सिजनमा यसको सेवन गर्नालेः
किड्नीमा समस्या देखानपर्ने, किड्नमा पत्थरी हुनेको लागी लाभदायक हुने,रक्त प्रवाह सहि तरिकाले हुने, मुटु स्वस्थ रहने, लामो समयसम्म जवान देखिने,
सुगरको लेवल कन्टो«ल हुने, शरीरमा म्याग्नेसियमको कमी नहुने हुन्छ ।
अनारको बोक्रा र पाउडरको विश्वासै गर्न नसकिने चमत्कारी फाइदाहरु यस्ता छन् !